Sida loola tacaalo Algorithm-ka YouTube-ka ee lagu xakameynayo waxa ku jira? - YTpals
Ku habboonaanta + Shakhsinimada = Guusha YouTube
Wax ka qabashada algorithmiyaha firfircoon ee YouTube-ka adag maaha qayb keeg suuqgeyneed. YouTube, kaas oo ku raaxaysanaya isticmaalka isticmaalka badan 2 bilyan, sidoo kale waa mashiinka raadinta labaad kaafinta baahida macluumaadka ee dadka, sida warbaahinta dhijitaalka ah ay u kobcayso waqtiyadan la joogo. Sidan oo kale, waxay ku siinaysaa awood aad u wayn si ay u soo jiidato rajada oo loogu beddelo macaamiisha dhabta ah. Laakin kaxaynta ka-qaybgalka YouTube iyo isdhexgalka dhagaystayaashu si ay u haleelaan calaamad sare oo caan ah waxay kaaga baahan tahay inaad si adag u fahanto algorithmamka YouTube, kaas oo ay hagayaan mabaadi'da shakhsiyaynta iyo ku habboonaanta.
YouTube waxa ay leedahay shuruuc darajo si fiican loo dejiyay kaas oo ay ku tusto muuqaal la xidhiidha oo la gaaryeelay isticmaalayaasha shan qaybood ka hooseeya: Guriga, Goobid, Dareenka Haddii aad la jaan qaadi karto waxa ku jira fiidyowgaaga algorithm-ka YouTube, fursadahaaga guusha ee goobta suuq-geynta fiidyaha waxay u badan tahay inay kordho laalaab badan.
Ku toosinta waxa ku jira algorithm YouTube
Waxaa jiray kiisas badan oo YouTube ay ka joojisay waxyaabaha fiidyowga ah inay ka soo muuqdaan qaybahan sababtoo ah ma waafaqsana algorithms-keeda. Haddii aad rabto inaad ka hortagto fiidiyowgaaga inuu xakameeyo algorithm YouTube, halkan waxaa ah dhowr tibaax oo degdeg ah oo ay tahay inaad hubiso.
1. Abuur nuxur wanaajiya ka qaybgalka
Waxay noqon kartaa mid adag in la wado ka-qaybgalka YouTube, laakiin dhab ahaantii kama baxsan kartid haddii aad rabto in lagu arko goobta. Algorithmamka YouTube waa wax walba oo ku saabsan u keenida dadka wax qiimo leh, khuseeya, iyo waxyaabo la gaaryeelay. Waxay u badan tahay in la qabto qayb kasta oo ka mid ah nuxurka taas oo dhalinaysa isdhexgalka iyo ka qaybgalka dhagaystayaasha. Abuuritaanka waxyaabaha fayraska leh ee leh sumado iyo ereyo muhiim ah ayaa kaa caawin kara inaad kordhiso tirooyinka ka-qaybgalka YouTube-ka, taasoo siinaysa YouTube sabab aad u muujiso nuxurkaaga ka hor adduunka. Ka-qaybgalka nuxurka waxay ku kordhisaa qiimaha nolosha dadka - wax xitaa YouTube uu rabo inuu ku gaaro algorithm-keeda. Haddii aad ka go'an tahay inaad abuurto wax soo jiidasho leh iyo macluumaad xog leh, dadaalkaaga suuqgeynta fiidyaha ayaa hubaal ah inay ka soo muuqan doonaan natiijooyin ganacsi oo waaweyn.
2. U wanaaji kanaalkaaga YouTube si aad u aragto
Si aad uga dhex muuqato natiijooyinka raadinta YouTube, waxaad u baahan tahay inaad muujiso algorithmamka YouTube inaad bixinayso waxay dadku raadinayaan. Waxaad fikradan kula xidhiidhi kartaa sharraxaadda kanaalkaaga iyo cinwaannada fiidyaha, labaduba waa qaybo muhiim ah YouTube SEO. Samee sharraxaadda kanaalkaaga-baarag ama laba- adiga oo ku daraya ereyada muhiimka ah ee warshadaha gaarka ah. Sidoo kale, cinwaanada waxa ku jira fiidyowgaagu waa in aanay ka badnayn 50 ilaa 60 xaraf oo ay ku jiraan ereyo fure ah. Tani waxay ka caawin doontaa algorithm-ka YouTube si uu ula socdo kanaalkaaga oo uu u muujiyo qaybo kala duwan. Mar kasta oo kanaalkaagu aad u wanagsan yahay, waxaa badanaya fursadaha uu uga soo muuqan karo natiijooyinka raadinta YouTube. Ugu dambeyntii, waxay si weyn u horumarin kartaa CTR-gaaga.
3. Joogto jadwal qoraal ah oo joogto ah
Xaqiiqdu waxay tahay in algorithm-ka YouTube uu leeyahay doorbidida kanaalada firfircoon. Kanaalka YouTube-ka ee hurda, ka kooban waxa la soo dhejiyay iyada oo aan la raacin jadwal, inta badan kuma guulaysto in uu kor u kaco. Madalku waxay tixgelisaa labadaba tirada fiidiyowyada kanaalkaaga iyo inta jeer ee la soo dhejiyo ka hor intaysan tusin dhagaystayaasheeda. Marka, furaha wax ka qabashada algorithmamka YouTube ee xakameynaya waxa ku jira waa in la abuuro oo la ilaaliyo jadwal dhejis ah. Haddii aad sidaas samayso waxay kaa dhigi doontaa inaad u ekaato mid joogto ah waxayna kordhinaysaa fursadahaaga guul. Raac xogta ay bixiso YouTube Analytics si aad u daabacdo macluumaadka wakhtiga ay dhagaystayaashaadu aad u firfircoon yihiin.
Dhab ahaantii waa inaad maskaxda ku haysaa talooyinka aan soo sheegnay markaad wax ku daabaceyso YouTube. Way wanaagsan tahay in laga digtoonaado arrimaha sababa algorithmamka YouTube in uu xakameeyo waxa ku jira fiidyowga. Haddii aad awoodo inaad ku kaxayso ka-qaybgalka YouTube iyo is-dhexgalka dhegaystaha iyada oo loo marayo macluumaadkaaga, hubaal waxaad heli doontaa jiidashada aad rabto. Si aad u hesho ka-qaybgal badan oo YouTube ah, waxaad isticmaali kartaa qalab sida YTPals, kaas oo kaa caawin kara inaad hesho macaamiil YouTube bilaash ah, jecel YouTube-ka bilaashka ah, iyo faallooyinka YouTube-ka bilaashka ah.
Sida loola tacaalo Algorithm-ka YouTube-ka ee lagu xakameynayo waxa ku jira? waxaa qoray YTpals Writers, 14 April 2022
Tafatirka YouTube-ka ayaa ku guuldareystay suuq kasta oo uu ubaahan yahay inuu iska ilaaliyo
In ka badan 2 bilyan oo dad ah oo adduunka ku nool ayaa adeegsada YouTube-ka si ay u daawadaan fiidyowyada noocyadooda kala duwan. Layaab ma leh sababta ay dad aad u tiro badani u doonayaan inay marin u helaan dhagaystayaashan weyn iyagoo noqda YouTubers. Si kastaba ha noqotee, ahaanshaha…
Sidee loo maamulaa olole lacag ururin ah YouTube-ka?
Lacag aruurintu waxay noqon kartaa geedi socod dheer oo daal badan marka la sameeyo iyada oo aan la helin qorshe ku filan. Si kastaba ha noqotee, had iyo jeer maahan inay sidaas ahaato. Olole dhaqaale uruurin oo sifiican loo qorsheeyay YouTube ayaa soo jiidan doona dadka badan wuxuuna hubin doonaa inaad…
Wax Ka Ogow Xayeysiimaha Dhex-Dhexaadka ah ee YouTube Halkan
Waa wax caadi ah in la arko YouTube oo noqda meel muhiim u ah suuqgeynta saamaynta. Iyada oo in ka badan 2 bilyan oo isticmaaleyaal ah bishiiba, YouTube-ka ayaa noqday mashiinka raadinta labaad ee ugu caansan ka dib shirkadda waalidkeed ee Google Ku guuleysiga guusha…